गल्फ्रेड वा श्रीमती गर्भवती हुनुभयो कि? थाहा पाउनुहोस् सजिलै टुथपेस्ट र चिनीबाट – Aawaj Media
Home /रोचक/गल्फ्रेड वा श्रीमती गर्भवती हुनुभयो कि? थाहा पाउनुहोस् सजिलै टुथपेस्ट र चिनीबाट
एजेन्सी – कुनै नियोजित ढंगले गर्भ रहन्छ, कुनै चाहि अप्रत्यासित वा योजना बिना नै । कतिले नचाहादा-नचाहादै गर्भ रहन्छ । यसरी रहने अनिच्छित गर्भले दम्पीतमा तनाव पैदा गर्छ ।
सबैभन्दा पहिला डिस्पोजल एवं प्रयोग गरिसकेपछि फ्याक्न मिल्ने कुनै चिजमा टुथपेस्ट राख्नुहोस् । त्यसमा केहि मात्रामा आफ्नो पिसाब मिसाइदिनुहोस् । केहि समयपछि हेर्नुहोस्, यदि टुथपेस्ट मैला जस्तो वा हल्का नीलो रंगको हुन सक्छ । यसको अर्थ हो, नतिजा सकारात्मक आयो । अर्थात तपाई गर्भवती हुनुभयो ।
यस्तो प्रयोग भने तपाई बिहान उठ्नसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चिनीबाट पनि यहि विधी अपनाएर गर्भ रहे/नरहेको परीक्षण गर्न सकिन्छ । चिनीमा थोरै पिसाब मिसाइदिने । केहि समयपछि चिनी घुलिनुको साटो डल्ला पर्न सक्छ । यदि त्यस्तो भयो भने तपाईमा गर्भ रहेको भनेर बुझ्न सकिन्छ । यदि चिनी र पिसाब आपसमा घुल्छ भने तपाईमा गर्भ रहेको छैन ।
घरमा साबुनबाट पनि तपाई प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि साबुन र पिसाब कुनै डिस्पोजलमा मिसाउनुपर्छ । केहि समयपछि साबुनमा स-सना फोकाहरु बन्यो भने तपाई गर्भवती हुनुभयो ।
बेलैमा जानीराखौ – मिर्गौला फेल हुने पहिलो कारण यस्तो छ, यसरी बच्न सकिन्छ यसबाट
मिर्गौलाले शरीरको रगत शुद्धीकरण गर्ने काम गर्छ। हामीले खाना खाएपछि शरीरमा जुन ऊर्जा प्राप्त हुन्छ त्यस क्रममा निस्कने ‘बाइप्रोडक्ट’लाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता बाइप्रोडक्टलाई मेडिकलको भाषामा ‘नाइट्रोजिनस टक्सिन’ भनिन्छ। यस्ता टक्सिन शरीरभित्रै रहेमा मानिस बेहोस हुने र शरीरका विभिन्न अङ्गमा असर गरेर मृत्युसमेत हुन सक्छ।
त्यस्ता टक्सिनलाई स्वस्थ मिर्गौलाले शरीरबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। त्यस्तै मिर्गौलाले शरीरको पानी र लवणहरुलाई सन्तुलनमा राख्छ। मिर्गौलाले चाहिने मात्रामा मात्र पानी शरीरमा राख्छ र अनावश्यक भएमा शरीरबाट पिसाबकोरुपमा निकाल्ने काम गर्छ। यसले शरीरमा लवणहरुलाई सन्तुलित मात्रामा मिलाएर राख्ने काम गर्छ। मिर्गौलाले शरीरको पिएच अर्थात अम्लियपनालाई सन्तुलनमा राख्छ। मिर्गौलामा हुने एक विशेष प्रकारको हर्मोनले शरीरमा रातो रक्तकण बनाउन मद्दत गर्छ र हड्डी मजबुत राख्ने काम पनि गर्छ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा तल्लो पेटको दायाँ वा वायाँ भागमा जडान गरिने भएकाले बिग्रिएको मिर्गौलालाई निकाल्नु पर्दैन। तर, बिग्रिएको मिर्गौलामा संक्रमण भएको खन्डमा वा अत्याधिक सुन्निएको भए शल्याक्रिया मार्फत निकाल्नुपर्ने हुन्छ। मिर्गौला फेल हुन थालेपछि तुरुन्तै लक्षण नदेखीन सक्छ । ८० प्रतिशत मिर्गौलाले काम गर्न छोड्दा पनि लक्षण नदेखिन सक्छ।
अन्तिम अवस्थामा लक्षण पत्ता लाग्नु नै यो रोगको मुख्य चुनौती हो। प्रत्यारोपण गर्नु मात्र गाह्रो कुरा होइन। त्यसपछि पनि मिर्गौलालाई र बिरामीलाई बचाई राख्नु चुनौतीपुर्ण हुन्छ । मिर्गौला प्रत्यारोपणमा सबैको दाता नहुँदा धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने वाध्यता छ।
१- पानी कम पिउने यदि तपाइँ नियमित पानी पिउने गर्नु हुन्न भने यसको सबै भन्दा पहिलो र खराव प्रभाव मृगौलामा पर्छ। पानीको अभावले गर्दा मृगौलाले रगत सफा गरेर फोहोर फ्याँक्न कठिन हुन्छ। यसले उल्टो परिणाम दिन्छ शरीरमा टक्सिन जम्मा हुन्छ।
२- नून बढी खानामा चर्को नून खाने बानी छ भने यसले रक्त चाप बढाउँछ। यसले मृगौलामा दवाव पैदा गर्छ। तपाँइले दिनमा ५ ग्राम भन्दा बढी नून खानु हानिकारक छ।
३- पिसाव रोक्ने यदि पिसाव आउँदा पनि पछि जाउँला भनेर बस्ने बानी छ भने आजै देखि बानी सुधार्नुस्। पिसाव रोक्ने बानीले मृगौलामा पत्थरी हुने र मृगौला फेल नै हुने खतरा समेत पैदा गर्छ।
४- गुलियो खाने बानी यदि गुलिया खानेकुरा धेरै बानी छ भने आजै देखि छोड्नुस्। गुलियो बढी खाँदा यसले शरीरमा प्रोटीनको मात्रा बढी भएर मृगौलामा समस्या हुन्छ।
५- पोषणको अभाव शरीरमा पोषक तत्वको अभाव भो भने मृगौला खराव हुन्छ। भिटामिन-ट र म्याग्नेशियम भरपुर खानाले मृगौलामा पत्थरी हुन दिँदैन।
६- मासु बढी खाने मासुको पारखी हुनुहुन्छ र बढी नै मासु खाने बानी छ भने पनि तपाइँको मृगौला समस्यामा छ। मांसाहारले शरीरको पाचन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्छ जसले मृगौलामा सोझै असर गर्छ।
७- अनिद्रा रातिमा निद्रा नलाग्ने वा धेरै जागा बस्ने बानी पनि मृगौलाका लागि घातक छ । यसले मृगौला सम्बन्धि विभिन्न रोग ल्याउन सक्छ । निद्राले मृगौलालाई स्वस्थ राख्न सघाउँछ ।
८- चिया कफी बढी सेवन चिया कफी अत्याधिक मात्रामा पिउँदा पनि मृगौलामा समस्या हुन्छ। चिया कफीले शरीरमा क्याफिनको मात्रा बढाउँछ जसले मृगौलामा भार पर्छ।
९- पेनकिलर सेवन टाउको दुख्ने वित्तिकै वा सामान्य दुखाइ कम गर्न पनि गोली खाने बानी छ भने आजै देखि छोड्नुस्। धेरै पेनकिलरको सेवनले तपाइँको मृगौलामा प्रभाव पार्छ।
१०-जाँड रक्सी अल्कोहल अर्थात जाँड रक्सीको अत्याधिक सेवनले पनि मृगौला समस्यामा पर्छ। यसले मृगौला फेल हुने अत्याधिक सम्भावना हुन्छ।
तपाईं हामी मध्य धेरैलाईखुट्टा बाउँडिने अथवा मासु फर्किने समस्याले सताउँछ । तर त्यो किन हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । यसबाट बँच्न तथा यो समस्याबाट जोगिन निम्न कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
मांसपेशी बाउँडिने अथवा फर्कने कारणहरु यस्ता छन्-
पानीको कमीः शरीरमा पानीको कमीले गर्दा पनि मानिसहरुलाई मांसपेशी बाउँडिने समस्या हुने गर्छ । शरीरमा पानी कम हुँदा शरीरमा पौष्टिक तत्वको कमी हुन्छ । शरीरमा तरल पदार्थ तथा मिनरल्सको कमीले गर्दा इलेक्ट्रोलाईको मात्रा विग्रने हुँदा यो समस्या उब्जन्छ ।
बसाई नमिलेमाः हामीमध्य धेरैजसो बसाईंमा त्यति ध्यान दिँदैनौ । जसले गर्दा शरीरमा बसाईंको तालमेल मिल्दैन । यसल शरीरको एउटा भागमा मात्र प्रेसर पर्न गई उक्त भागमा पोषण लगायतको अक्सिजनको कमी भएर मासु बाउँडिने गर्दछ ।
रक्तसञ्चार राम्रे नभएमाः शरीरमा रक्त सञ्चार राम्ररी नभएमा पनि मासु बाँउडिने गर्दछ । यसको रोकथामका लागि उक्त भागलाई कस्ने भन्दा पनि तातो लगाएर रक्त सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
पोटासियमको कमीः पोटासियमको कमीले पनि शरीरमा इलेक्ट्रोलाईटको मात्रा विग्रन्छ । जसले गर्दा खुट्टा बौडिने, मासु फर्कने लगायतका समस्या देखा पर्छ ।
यसबाट बच्न तथा शरीरमा पोटासियमको मात्रा बढाउन केरा, पात भएका तरकारी, ड्राई फुड्स लगायतका पोटासियमयुक्त खाना खानु उचित हुन्छ ।
यी ४ राशिको भाग्य अबको ३ वर्षसम्म चम्किने, तपाईको राशि त परेन